के तपाइलाइ लामाे कपाल मन पर्छ ? यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय - खबर मलाई
११ भाद्र २०७६, बुधबार ११ भाद्र २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on के तपाइलाइ लामाे कपाल मन पर्छ ? यस्ता छन् कपाल लामाे बनाउने घरेलु उपाय
कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला । प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि मद्दत पुग्छ ।
प्याजका साथ कागती : कागती र प्याजको रसको प्रयोगले कपालको विकासमा मद्दत गर्छ । कागतीको रसले टाउकाको छाला अर्थात् स्काल्पलाई सफा गर्न मद्दत गर्नुका साथै कपाल झर्न पनि रोक्छ ।
कपाल स्ट्रेट बनाउने घरेलु उपाय
प्रायः मनिसहरुको आफ्नो कपाल राम्रो बनाउने सोख हुन्छ । कसैलाई लामो कपाल मन पर्छ भने कसैलाई छोटो र कसैलाई घुमेको कपाल मन पर्छ भने कसैलाई शिल्की परेको । यसैका शिलशिलामा प्राय महिलाहरु पार्लर धाइरहेका हुन्छन् ।
हामी सबैले आफ्नो कपाल लामो र सिल्की होस् भन्ने चाहना हुन्छ । अब कपाल स्ट्रेट बनाउन पार्लर धाइरहनुपर्दैन । घरमा नै घरेलु सामाग्री प्रयोग गरी आफ्नो कपाल स्ट्रेट गराउने केही घरेलु उपायहरु पनि छन् । यसैका लागि कयौं खर्च गर्नुपर्छ । आउनुहोस् घुमेको कपाललाई सिधा बनाउने केहि घरेलु उपाय जानौ ।
भान्सामा काम लाग्ने उपयोगी टिप्सहरु
ट्युसन पढ्न गएका ८ जना विद्यार्थी बेहोस, एकजनाको मृत्यु
कास्कीमा कुष्ठरोगी घट्दै
३० बैशाख २०७६, सोमबार ३० बैशाख २०७६, सोमबार खबर मलाई
१७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार खबर मलाई
यी तीन तरिकाले हटाउनुस् पेट विकार
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार खबर मलाई